Korontana Tao Addis : Mitatitra Ireo Blaogera sy Mpanao Gazety Any an-Toerana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 27 Febroary 2019 7:40 GMT
Tanatin'ny telo andro izao no niaina tanteraka tanaty herisetra i Addis Abeba, satria namaly ny tora-bato natao taminy tamin'ny alalan'ny fitifirana basy ireo polisy sy ireo tafika mitam-piadiana mahery vaika. Maherin'ny telopolo no voalaza fa namoy ny ainy. Nabaribarin'ireo bilaogera sy mpanao gazety tao an-toerana ho an'izao tontolo izao tamin'ny fampiakarana sary ny zava-nitranga tao Addis sy ny halehiben'izany .
Ireo Dokotera nitondra haingana lehilahy iray naratra nandritra ilay korontana tao Addis ho ao amin'ny Hopitaly Black Lion. Sary nalain'ilay bilaogera Andrew Heavens.
Tohin'ilay fitsapan-kevibahoaka notanterahin'ny parlemantera ny volana May ireo hetsi-panoherana ireo, izay nambaran'ireo mpiandany amin'ny mpanohitra fa nahodinkodin'ny antokon'ny fitondran'i Meles Zenawi. Ny Alatsinainy, mpamily fiarakaretsaka maro no voasambotra ary nesorina tamin'izy ireo ny fahazoandàlana hamily fiara taorian'ny nanoheran'izy ireo ny valin'ilay fifidianana. Izany, narahina fisamborana ireo manampahefana ambony avy amin'ny antoko mpanohitra nampangaina ho namadika, voalaza fa nanentana ny mpanohana ny CUD (ilay antoko mpanohitra sangany) hidina an-dalambe. Haingana sady feno herisetra be ny fihetsiky ny polisy sy ny miaramila nanoloana ireo hetsi-panoherana ireo – nilaza ny dokotera tao amin'ny Hopitaly Black Lion Hospital fa voatifitra teo amin'ny tratrany daholo ny ankamaroan'ireo niharam-boina ary nampangain'ireo vavolombelona nanatri-maso ho nitifitifi-poana ny polisy sy ny miaramila. Nazret, mpanangona ireo vaovao sy blaogera avy ao Etiopia, no nanokatra sehatra manokana ho an'ny tatitra avy amin'ireo vavolombelona nanatri-maso ny zava-nisy tao Addis – manara-maso ny adiresy IP izy ireo mba hanamarinana fa tena avy amin'ny solosaina ao Etiopia marina ny fanehoankevitra. Fehinkevitra vitsivitsy avy amin'ireo tatitry ny Nazret :
Nanoratra i Mimi hoe :
Niaraka tamin'ny namako aho niantsena tao Merckato, no tampoka teo nahare olona nihiaka sy nihazakazaka nanodidina ahy. Tanaty fahatairana mafy aho nandritra ny fotoana fohy ary nanomboka nisintona ahy ilay namako. Avy eo izahay vao nanomboka nihazakazaka haingana araka izay azonay natao narahina bala tena izy nandalo teo aminay, niaraka tamin'ny fisavorovoroana tsy hitako izay nalehan ilay namako. Ankehitriny, tsy fantatro izay misy azy, ny hany azoko atao dia ny mivavaka ho azy sy ho an'ny tsirairay avy aty Etiopia. Mandà ny hanome fahalalahana ho antsika ity governemanta ity, toy ny alika romotra izy ireo mitifitra antsika , mitomany aho eto ampanoratana an'ito. ANDRIAMANITRA manampy antsika sy mivavaka ho antsika
Manahy i Massa hoe fitaovam-piadiana mahery vaika no fitaovana nampiasaina fa tsy basy “semi-automatique” (Kalachnikovs) :
Ry namako malala isany, tsy vitako ny mamantatra ny karazana fitaovam-piadiana ampiasaina eto Ferensay, fa azoko antoka fa tsy Kalachnikovs. Mafonja be ny feon'ilay fitaovam-piadiana. Nahita faty maro eny lavitra eny aho, saingy tsy ho avelan'ireo miaramila hanakaiky ilay faritra misy ny ady …
Taoriana kelin'ny mitataovovonana tao Addis, nanolotra ity tatitra ity i Netsanet :
Toy izao manaraka izao ny toe-draharaha ao Addis : 1. Tsy misy Gazety intsony. 2. Voasambotra avokoa ny andiana tanora rehetra. 3. Tifitra basy no re mitsena ireo olona rehetra nanerana an'i Addis mangataka eny an-dalambe ny famotsorana ireo mpitarika politika tsy manan-tsiny 4. Mihidy daholo ny ankabeazan'ny tsena 5. Mitaky ny famotsorana ireo mpitarika politika tsy manan-tsiny avokoa ny olona rehetra. 6. Miandry ny torolàlana avy amin'ny solontenan'ny CUD ny olona hahafahan'izy ireo handray andraikitra misimisy kokoa, Netsanet.
Raha mbola nitohy ny herisetra, nivadika ho adihevitra teo amin'ireo mpanohana ny CUD sy ny mpanohana ny EPRD (ny antoko eo amin'ny fitondrana) ny adihevitra. Kanefa mbola mitohy androany ireo tatitra alefan'ireo nanatri-maso. Mitatitra ny “Yasteseryal” :
Nitohy tanatin'ny telo andro ny fifandonana tao Addis, manodidina ny faritr'i Meksiko. Fantatra izao fa namono olona iray izy ireo. Raha iny nanohitra tsy nety niditra tao anaty fiaran'izy ireo iny izy ( ilay niharam-boina), dia notifirin'ny iray tamin'ireo miaramila teo amin'ny tratrany.
Ary omaly tamin'ny misasakalina, nanafika trano indray ireo miaramila. Nalain-dry zareo tany an-tranony sy nogadrainy ireo tanora mihoatra ny 2.000 sy zatovolahy lahy manodidina ny roampolo taona teo ho eo. Tany amin'ny faritra sasany tao an-toerana, nisava ny karatpanondro maha ‘Kebele’ fotsiny izy ireo.
Satria Eid Mubarak ny andro androany ho an'ny Silamo, toa somary milamindamina ny olona mba tsy hanelingelina ny vondrom-piarahamonina Miozolomana. Na izany aza, mihamitombo ny fihenjanana ary tsy misy fiara fitanterana miasa na tsena mba misokatra.
Sary nalain'i Andrew Heavens avokoa ny ankamaroan'ny sary mampihetsi-po indrindra avy ao Addis, mpaka sary mahaleotena izy (mpitifitra sary ho an'ny Reuters amin'izao fotoana izao), izay mibilaogy tsy tapaka ao amin'ny Meskel Square. Mazava araka izany fa tsy mbola nanam-potoana hanoratana momba ireo zava-nitranga tao anatin'izay roa andro farany izay izy, ny bilaoginy no tena ho jerena rehefa milamindamina kely eo ny toe-draharaha. Nandefa sary nalain'i Heavens mikasika ilay hetsi-panoherana sy ireo maro hafa tao Addis i Nazret. Tsy ny rotaka ihany no asehon'ny sarin'i Andrew ao amin'ny Flickr fa ny fiainana ao Addis amin'ny ankapobeny ihany koa.
Ferengi iray ao Addis, bilaogy iray amin'ny fiteny frantsay mitondra ny anarana hoe “Ny bilaogin'ny vehivavy iray mpila ravinahitra na ny tatitra tsy mahafinaritra mahakasika jadona iray mahazatra ” manolotra karazana resaka manodidina ny herisetra sy mahakasika ny fisamborana ireo mpitarika ny mpanohitra (amin'ny teny frantsay daholo) . Niverina tany Addis izy io maraina io ary nanolotra lahatsoratra nampihetsi-po iray momba ny takaitra navelan'ilay herisetra :
Amin'izao maraina amin'ny 8:30 izao, saika voafafa avokoa ireo soritra korontana rehetra. Tsy mbola nisy nanala teo amin'ny araben'ny ring road anefa ny korontam-by tamin'ilay fiara fitateram-bahoaka may kila forehatra ary fiara roa no mbola mirehitra. Afaka vinaniana ny fisian'ny afo, ny kodiarana nodoroina tetsy sy teroa, sy ny holatry ny herisetra tsy hita nanjavonana.
Fahatsapàna ihany anefa izany, mazava ho azy. Tsy miasa ny fiara karetsaka, mihidy avokoa ny tsena, ireo miaramila misatroka mena mirongo fitaovam-piadiana hatreny an-kitrokely – no mihaodihaody sy mamita ny asa maha mpandevina azy. Ny sasany amin'ireo polisy federaly mipetrapetraka eny amin'ny bozaky ny Bole Road, izay lalambe ao Addis.
Niteraka fanehoankevitra maro ny hafatra nalefan'i Sokari momba ilay fifandonana, izay nanakiana be ny governemantan'i Meles sy ny tsy firaharahian'ny vondrona iraisam-pirenena ny hetsika tao Addis. Hoy Selam nanoratra : “Ahoana no ahafahan'ny tandrefana milaza ho manana ny demokrasia kanefa manameloka ny olona tsy manan-tsiny any Etiopia sy any an-kafa. Ankehitriny, ny tandrefana, i Etazonia sy Angletera no tena mpanohana an'i Meles chenawee ilay mpanao jadona, mpamono olona . Tokony hitovy ny andraikitra raisin'izy ireo noho ireo ràn'ny olona tsy manan-tsiny latsaka, na ao Addis Abeba na any amin'ny toerana hafa ao Etiopia. “